Welcome kunyora chero mutsetse uye usiye chiratidzo yako pazasi Guestbook.
Guestbook iri pasi mushanyi Nhamba mapeji Holm dunhu racho-vakashanya zvikuru. Zvisinei, zviri kakawanda mumwe munhu anonyora chimwe chinhu. Danidzira nenzwi rako!
Siyai mumwe kukwazisa kana kutaura zvamunofunga pamusoro chinhu chaunacho mupfungwa!
0 pfungwa iri "Guestbook”
Gun Lundgren pamusoro 12 Chikumi, 2016 pa 13:51 akati:
Sezvo vakaberekwa Holmbo pekugara Östbyn kusvikira chikoro akatanga, Ndinonzwa kupisa pamusoro Holm. Vachiri shamwari neshamwari mumusha uye sokuti musha pandinosvika ikoko. Kwaziso kubva Gun.
Rockabilly Vapanduki Sundsvall pamusoro 30 Chivabvu, 2015 pa 19:26 akati:
Hi. Holmbygden. Kungoda kuratidza kuti Midsummer Meet hazviitiki gore rino. Zvinosuruvarisa ingaita ehe. Asi kana vaya anofanira uchityaira chinhu zodzera, Uye kunyange nhema pamusoro pezvinhu, Ord.vakter Bet, moods, etc.. Zvadaro ngatiregei pachinzvimbo Midsummer Meet kupinda Graven..Rockabilly Vapanduki .
Havasati nechinangwa kumunyengedza / kuridza chero .Därmed tinokutendai isu uye tariro unogona kuwana chimwe chinhu mudunhu iri kuti tishande nani pane zvatinenge vachiedza
O Honest Greetings Kind
ROCKABILLY vapanduki SUNDSVALL
Tinotendawo pavo 2 Mwaka vakanga .
Holmbygden.se pamusoro 2 Chikumi, 2015 pa 23:22 akati:
Hej alle Rockabilly Vapanduki,
Yakanga kubva vatinoshamwaridzana navo bhowa chaizvo (!) kunzwa nezvazvo zviri zvishoma Midsummer Meet muna Holm. Sad kunzwa nyaya yako. Zvikasadaro, yakanga iri aionga chaizvo iniative pamwe urongwa uye mafaro nevashanyi zvose kumaruwa.
Thanks ose basa iwe kuisa pasi!
Holm dunhu racho Development
Lina Näslund pamusoro 15 Kubvumbi, 2015 pa 18:14 akati:
Hi! I kurarama pano mumusha kwenguva duku uye manufactures zvishongo
Uye masheya munhu kuti hu kufarira nzvimbo? munhu ziva
Mumwe nomumwe chiitiko aigona kuchengeta usiku? pachokwadi Lina superlina84@hotmail.com
Søren Olofsson pamusoro 14 Zvita, 2013 pa 12:36 akati:
Tinotenda zvose Info kubva Holm!
Holmbygden.se pamusoro 16 Zvita, 2013 pa 10:01 akati:
Very shamisa kunzwa kuti refu-daro vakokwa kunzwisisa uye kushanyira kwedu yepaIndaneti!
Karl Blomberg pamusoro 26 Kubvumbi, 2012 pa 08:30 akati:
Makorokoto website huru!
Zvino munofanira tizivise URL Somuenzaniso, nezviratidzo zvachose kupinda hunoratidza Holm kudunhu.
Holmbygden.se pamusoro 26 Kubvumbi, 2012 pa 14:35 akati:
Hongu, pfungwa akatipa anoshushikana. Zvisinei, saka kure, hapana mhando chinhu chakaitwa – basa zvakare kuitwa nomunhu… Tinofara kusvikira zvose zvinobatsira kutengesa isu, nekuti zvakadaro kure nayo chete hwakapararira kuburikidza mururimi rwavo uye Indaneti zvarwo.
Tinotenda kuti pfungwa!
Peter Lindeberg muna Skåne pamusoro 6 Kukadzi, 2012 pa 11:45 akati:
Zvaifadza kuti email pa vaUra Lindenberg iri itsva paIndaneti kubva Holm dunhu. Latest nhau kunyora dzakanzi neni zvimwe kubva Priest Carl-Heinrich Smuzzler (ruregerero chiperengo) kana iye fastidiously yakatanga tsamba nemashoko facile mitengo “Nix Pix” uye “Costa Free”. The una mashizha zvakanakisa kuverenga pamusoro muruwa rwose. Saka, ndinotarisira zhinji mhando iyi mail.
Tinotenda kuti nzvimbo huru kuti ini zvino kubatana subscribers.
Peter kudanana kubva Vikholms Ini Anundgård
Roland Hultman pamusoro 12 Ndira, 2012 pa 08:56 akati:
Nguva dzose mafaro kuverenga kuitika mu dzangu chaidzo sezvo yokumbozorora pakati kungoverenga kuitika nechepakati zvikamu kubva Municipality.
Kudos kunemi Rinotarisira ichi kwatiri vanofarira, tariro iwe kuwana rubatsiro aifanira kuita izvi.
Holm dunhu ndiyo nzvimbo yakanakisisa dzandakamboenda munguva yangu kupfuura 60 – upenyu gore saka kure uye zvimwe kuramba saka….
Niklas pamusoro 30 Mbudzi, 2011 pa 18:41 akati:
HBU Thanks ose basa iwe kuisa pasi kwatiri pano muruwa! =)
#31 achiedza itsva Guestbook inoti =)